Fankalazana ny 8 marsa : nibahan-toerana ny sosialy | NewsMada
Fankalazana ny 8 marsa : nibahan-toerana ny sosialy
Samy nanana ny fomba nankalazany ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy ny sokajim-behivavy misy eto amintsika. Niavaka ny diabe nataon’ny ben’ny Tanàna, Ravalomanana Lalao, sy ny ekipany ao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra niainga avy eny Mahamasina ary niafara teny amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, omaly vao maraina.
Nitohy tamin’ny fampahafantarana ny tsimokaretina Vih/Sida ny hetsika ka nisy ny fitiliana maimaimpoana ho an’ireo rehetra vonona, miaraka amin’ny tolotra ara-pahasalamana fanaon’ny BMH mahazatra. Ny tapak’andro hariva, niadiana hevitra ny anjara andraikitry ny vehivavy eo amin’ny fampandrosoana ny tanàna. Mbola fitiliana koa no nokarakarain’ny vehivavy mpitsabo ao amin’ny sampana fitsaboana ny homamiadana, HJRA sy ny fikambanana JCI. Notiliana ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza izay maimaimpoana omaly raha 20 000 Ar ny sarany amin’ny andavanandro. Mbola mamely vehivavy betsaka ny homamidan’ny nono (30%) sy ny vozon’ny tranon-jaza (25%) eto amintsika ka ilaina ny fanentanana sy fitiliana maimaimpoana tahaka izao isorohana ny fihomboan’ny aretina.
Nanao diabe niala avy eo amin’ny caserne eo Mahazoarivo ary nihazo ny lapan’i Mahazoarivo kosa ny vadin’ny praminisitra, Ravelonarivo Josiane, omaly, niaraka amin’ny vehivavy mpiasa eo amin’ny fiadidiana ny primatiora. Namelabelatra momba ny zon’ny vehivavy sy ny fahaiza-mitondra koa ny tomponandraikitra.
Nizara fanomezana kosa ho an’ny vehivavy tsaboina sy mpiteraka ao amin’ny toeram-piterahana Befelatanana ny vehivavy loholona notarihin’ny vadin’ny filohan’ny Antenimerandoholona. Nahazo fanampiana koa ny vehivavy zokiolona teny amin’ny Foyer de vie sy ny Fizoma 67ha.
Nandray fanamarihana nasionaly ny tanànan’Antsiranana omaly. Ankoatra ny kabary mahazatra rehefa fety tahaka izao, nisy ny fitokanana ny toeram-panofanana momba ny asa ho an’ny vehivavy. Miankina amin’ny minisiteran’ny fampianarana teknika sy fiofanana momba ny asa ny foibe. Nanotrona ny hetsika ny vadin’ny filoha, Rajaonarimampianina Voahangy. 1 000 ny andriambavilanitra nivahiny tany an-toerana nisolo tena ny faritra 22.